Xiisaha Weyn ee loo yaqaan 'Cybertruck', oo uu soo saaray Elon Musk | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAAmericaXiisaha weyn ee Cybertruck oo la socda Elon Musk
26 / 11 / 2019 America, DUNIDA, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, VIDEO
Moodeel qaabeynta loo yaqaan 'cyla model model'
Shirkad sameeysa gawaarida korontada ee Mareykanka ee Tesla ayaa soo bandhigtay moodeelkeeda cusub ee nooca xamuulka qaada ee Cybertruck usbuucii hore. Naqshadeynta gaariga, muraayadda ayaa la jebiyey intii lagu jiray soo bandhigida ayaa ahayd ajendaha maalinta koowaad. Marka lagu daro kuwan oo dhan, Elon Musk wuxuu ku dhawaaqay in 3 uu helay kumanaan ka mid ah amar-bixinnada 200 maalin kasta. Wax soo saarka ballaaran ee Cybertruck ayaa la filayaa inuu bilaabmo dhamaadka 2021.
Iyada oo tweet-ka uu Musk la wadaago Axadda, waxaan ku baranay in kun oo amar-hore oo ah 200 laga helay Cybertruck. Cybertruck waxay si rasmi ah u muujisay inay heshay baahi culus iyada oo la gaarey tirada tiradaan ee amar-horay oo keliya maalmaha 3.
Maamulaha shirkadda Tesla Elon Musk ayaa sameeyay horudhacdii ugu horreysay ee nooca soo qaadidda korantada oo ay horey u ballanqaaday inay soo saari doonto. Naqshadeynta mustaqbalka ee mustaqbalka Cybertruck waxay u egtahay gaari gaashaaman. Intii lagu jiray soo bandhigida qaadista, waxaa sidoo kale loo tijaabiyay cimri dherer. Masraxa, madaxa naqshadeeyaha Tesla Franz von Holzhausen wuxuu bilaabay inuu ku dhufto Cybertruck isagoo koranto wata koronto. Wax khasaaro ah kama hadhin saameynta uu ku leeyahay shaqada jirka.
Si kastaba ha noqotee, qalabka dab-damiska ee jabay intii lagu jiray naqshadeynta iyo dhiirrigelinta gaariga ayaa weli ka mid ah saamiyada baabuurta ee internetka laga wadaago. In kasta oo daaqadaha aysan gabi ahaanba burburin, way burbureen. Waxaa la sharaxay in daaqadaha gaarigaan xoojiyay ay ahaayeen kuwa aan burburin karin. Musk ma uusan sugin natiijadan, wuxuu yiri dhalada ma ahan inay jabto imtixaankana wuu fashilmay.
Kusii talagal Cybertruck macaamiisha waxay u baahan yihiin inay bixiyaan lacag dhigaal ah oo ah $ 100 dollars. Sannadka soo saarista gaariga waa 2021. Musk wuxuu ku wadaagay warbaahinta bulshada in 146 kun boqolkiiba boqol-ka-hor 42 uu yahay mataano-isku-dabacsan oo Cybertruck ah, 41 waa matoor-saddex ah iyo 17 waa matoor hal-ah. Qiimaha Cybertruck 39 kun 900 wuxuu ka bilaabmayaa $. Nooca ugu sarreeya ee gaariga waa $ xNUMX kun 69 dollars. Xirmooyinka xirmooyinka-bilowga ah ee '900 kun-dollars' waxay leeyihiin xadka 40 km.
500 oo leh labadiisa matoor iyo afar-giraangiraha wadista gawaarida wuxuu bixiyaa tiro baaxad leh oo u dhow km, 50 waxaa lagu iibsan karaa sumad qiimahoodu yahay kun dollar. Qiyaasta ugu badan ee masaafada 800 masaafada ah ee 3 moodeel iyo afar-giraan gaari wadis ah oo ah qiimaha xNUMX kun oo doolar ayaa lagu yiri. 70 oo leh labadiisa matoor iyo afar-giraangiraha wadista gawaarida wuxuu bixiyaa tiro baaxad leh oo u dhow km, 500 waxaa lagu iibsan karaa sumad qiimahoodu yahay kun dollar. Qiyaasta ugu badan ee masaafada 50 masaafada ah ee 800 moodeel iyo afar-giraan gaari wadis ah oo ah qiimaha xNUMX kun oo doolar ayaa lagu yiri. Dardargelinta qaabkaan laga bilaabo 3 illaa 70 km waa kaliya ilbidhiqsiyo 0. Kuwa raba inay lahaadaan noocaan ugu sareeya waa inay sugaan sanad kale.
Tesla waxay ikhtiyaar ah ku dari doontaa xirmada wadista iskeed u taagan dhammaan moodooyinka qaadista. Kuwa doonaya 7 darawalnimo iskood u taagan waa inay bixiyaan wax kabadan kun doolar. Soo bandhigidiisa, Maamulaha Shirkadda Tesla wuxuu xusay in sedex ka mid ah moodooyinka ugu iibinta badan Mareykanka ay yihiin kuwo la soo qaaday.
U Qaadi Elon Musk Ultra-Fast Hyperloop Kaliya 1 Dollars
Soo saaraha Gawaarida Korontada ee Mareykanka
Gawaarida Xamuulka ee Cybertruck
Fiidiyowga xayeysiinta ee Cybertruck
Model Cybertruck Model